बैंकिङ परीक्षा विशेषः के हो प्रतीत पत्र (Letter of Credit) र यसका विशेषता ? - Everest Dainik - News from Nepal
बैंकिङ परीक्षा विशेषः के हो प्रतीत पत्र (Letter of Credit) र यसका विशेषता ?
२.Documentary letter of credit : क्रेता र विक्रेताको अनुमतिविना जुन सुकै बखत संशोधन तथा रद्ध गर्न सकिने प्रतित पत्रलाई Revocable र क्रेता र विक्रेताको अनुमति आवश्यक पर्ने प्रतितपत्रलाई irrevocable भनिन्छ । irrevocable प्रतितपत्र पनि Unconfirmed/Confirmed गरी दुई प्रकारका छन् । Unconfired credit अन्तर्गत बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने एक मात्र बैंक क्रेताको बैंक हुन्छ । बिक्रेताको बैकले Document Negotiation गरी बिक्रेतालाई भुक्तानी दिई शोधभर्ना माग गर्न पनि सक्दछ वा Document collection मा पठाई Issuing बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त भएपछि मात्र बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्न पनि सक्दछ । Confirmed credit मा बिक्रेताको बैंकले बिक्रेतालाई भुक्तानीको ग्यारेण्टी गर्दछ । Advising Bank ले आवश्यक कागजातहरु प्राप्त भई पुनरावलोकन गर्दा उपयुक्त भए बिक्रेतालाई भुक्तानी गरिदिन्छ र Issuing Bank बाट शोधभर्ना माग गर्दछ । युद्ध, सामाजिक, राजनैतिक तथा वित्तीय संकट भएका देश तथा क्षेत्रबाट प्राप्त प्रतितपत्रहरुमा बिक्रेताले यस्तो प्रावधानको माग गर्दछन् । Issuing Bank प्रति कम विश्वास भए वा वित्तीय साधनको पुर्व आवश्यकता भए पनि यस्तो प्रतितपत्र आवश्यक हुन्छ । यस्तो प्रतितपत्र तुलनात्मक रुपमा महंगो हुन्छ ।
ट्याग्स: Letter of Credit, प्रतीतपत्र